नेपाली वैज्ञानिक सहभागी टोलीले पत्ता लगायो ‘खतरनाक’ जीका भाइरसको औषधि
काठमाडौं, ३० जेठ– नेपाली वैज्ञानिक सुदीप खड्कसहितको वैज्ञानिकहरुको समूहले जीका भाइरसको औषधि पत्ता लगाएको छ । खड्कासहितको १० जना वैज्ञानिकको टोलीले अरबिडोल÷उमिफेनोविर नामक औषधि पत्ता लगाएको हो ।
अमेरिकाको वाशिङटन विश्वविद्यालय (डा. स्टेफेन पोल्यक ल्याब) र जर्जिया स्टेट विश्वविद्यालय (डा. क्रिस्टोफर व्यस्लेर ल्याब) मा औषधिको पुनःप्रयोग तथा पुनःप्रायोजनको लागि नेपाली वैज्ञानिक खड्कासहितको वैज्ञानिकको टोलीले अनुसन्धान गरेका थिए ।
उक्त औषधि केही मुलुकहरुमा फ्लू तथा इन्फ्लुअन्जाको उपचारको निमित्त प्रयोगमा आइसकेको नेपाली वैज्ञानिक डाक्टर सुदीप खड्काले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिले नै यो औषधिको असरको बारेमा अनुसन्धान समेत भइसकेको छ । हामीले पत्ता लगाएको औषधिलाई चाडै नै जीका प्रभाभित क्षेत्रमा पुर्‍याउँन सकिन्छ भन्ने विस्वास छ ।’
उक्त औषधिले जीका भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने पुष्टि समेत भइसकेको नेचर जर्नलको साइन्टिफिक रिपोर्टसले सन् १२ जुन २०१८ मा प्रकाशित समेत गरिसकेको छ ।
के हो जीका भाइरस ?
जीका एइडीज प्रजातिको लामखुट्टेबाट सर्ने गर्दछ । तर अन्य तरिकाबाट पनि यो भाइरस सर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । नाइजेरियामा पहिलोपटक जिका भाइरस आधिकारिक रुपमा पहिचान भएको थियो ।
जीका लामखुट्टे पाइने स्थानहरुमा व्यापक रुपमा फैलिएको रोग हो ।
विश्वमा व्यापक रुपमा फैलिएको जीका बिरुद्ध यसअघि कुनै औषधि र भ्याक्सिन बनेको छैन । जीका भाईरस यौन सम्पर्क को मध्यम बाट पनि सर्छ । जीकाले भाइरसले गर्भमा रहेको भ्रूणको स्नायुको विकासमा अबरोध पुर्‍याउछ । जीका भाइरसले गर्भपतनको जोखिम समेत बढाउने र साथै गर्भपतनको जोखिम पनि बढाउने डा. खड्काको भनाइ छ ।
गर्भवती हुने उमेरका महिला तथा शिशु र वृद्धवृद्धाहरुमा समेत जीका भाइरसको जोखिम धेरै हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले लामखुट्टेका कारण सर्ने जीका भाइरसको कारण गर्भमा हुर्किरहेको शिशुमा शारीरिक तथा मानसिक विकाशमा अवरोध सिर्जना गरी गम्भीर समस्या तथा विकार पैदा गर्ने जनाएको छ ।
जीका भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वमा जीका भाइरस संकटकालको घोषणा समेत गरिसकेको छ । हालसम्म जीका भाइसरको संक्रमण अफ्रिका लगायतका ८ देशहरुमा फैलिसकेको छ । नेपाल पनि जीका फैलिने खतरा भएको क्षेत्रमा पर्छ ।
नेपालको बाग्लुङ स्थायी घर भएका डा.खड्कासहतिको वैज्ञानिकहरुको टोलीले केही समय अगाडि इबोला भाइरसको औषधि समेत पत्ता लगाएका थिए ।
को हुन् डाक्टर सुदीप?
डा.सुदीप खड्का बागलुङका पूर्वसांसद स्वर्गीय हरिबहादुर खड्का र पूर्व गरिवी निवारण तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काका जेठा छोरा हुन् । शिक्षित परिवारमा जन्मिएका खड्का सानैदेखि अन्तरमुखी स्वभावका थिए । आधारभूत शिक्षाको सुरुवातमा नै उनी अन्य पुस्तकहरु पढ्न रुची राख्थे ।
वैज्ञानिक बन्ने सपना लिएका सुदीपले घरमा रहेको घडी, रेडियो टिभी फुकालेर फेरी बनाउने प्रयास गरीरहन्थें ।
उनले बाल्यकालको घटना सम्ंझर्दै लोकान्तरसँगको कुराकानीमा भने, ‘मलाई साइन्टिस्टहरुको बारेमा लेखिएको पुस्तक पढ्न रमाइलो लाग्थ्यो । एकदिन पत्रिकामा एकजना २६ वर्षमै पीएचडी गरेका वैज्ञानिकको बारेमा समाचार पढें । त्यो समाचारले मलाई प्रभावित बनायो । समाचार पढेपछि मलाई पनि वैज्ञानिक बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । मैले ठूलो भएपछि साइन्टिस्ट बन्छु भन्थे ।’
बागलुङमा कक्षा सातसम्म पढेका खड्काले आठ कक्षाबाट काठमाडौंको ग्यालेक्सी स्कुलमा अध्ययन गरे । उनले सोही स्कुलबाट एसएलसी दिएका हुन् । एसएलसी पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट खड्काले आइएस्सी गरे ।
आइएस्सीमा राम्रो अंक आएपछि घरपरिवारले सुदीपलाई डाक्टर बनाउने सपना लिए । तर सुदीपले सानैमा वैज्ञानिक बन्ने सपना बनाइसकेका थिए ।
एमबिबिएस पढाएर छोरालाई डाक्टर बनाउने सुदीपको बुवाआमाको सपना थियो । एमबिबिएस पढाउने बुवाको निर्णयलाई सुदीपले अस्वीकार गरीदिए । डाक्टरले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर अरुले पत्ता लगाएर तयार भएको औषधि खानु भन्ने सल्लाह दिन्छन् । तर सुदीपलाई आफैले नयाँ औषधि पत्ता लगाउने चाहना थियो ।
बुबाको डाक्टर बनाउने सपनालाई त्यागेर सुदीप सन् २००३ मा अमेरीका गए । नेपालमा एमबिबिएस भर्ना भएको वर्ष दिन नपुग्दै साइन्टिस्ट बन्न अमेरिका पुगेका सुदीपले अमेरिकामै पीएचडी गरे ।
त्यसपछि उनलाई अमेरीकामा धेरै अवसरहरु पाप्त भयो । उनले आफ्नो वैज्ञानिक बन्ने सपनालाई पुरा गर्न सफल भए । तीन वर्ष अगाडि अमेरिकाको जर्जिया राज्यस्थित इन्स्टिच्युट फर बायोमेडिकल साइन्स विश्वविद्यालयमा भाइरसको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अवसर पाए । उनीले त्यो अवसरलाई निकै महत्त्वपूर्ण रुपमा लिए ।
अमेरिकामा इबोलाको औषधि पत्ता लगाउने वैज्ञानिक सुदीपको योजना– नेपाल फर्किएर राजनीति गर्ने !
लुम्बिनी भ्रमण वर्ष : धुलाम्मे सडकमा कति पर्यटक आउलान् ?
खाडीमा २० वर्ष चुहाएको पसिना माटोमा : न घर आफ्नो रह्यो, न श्रीमती, न त छोराछोरी नै !
महिला भलमन्साको अनुभूति : समाजमा अझै महिलाको नेतृत्व रुचाउँदैनन्